မိန်းမတွေ တမ်းတမ်းစွဲချစ်မ၀နိုင်ဖြစ်ပီး ဘယ်တော့မှပြစ်မသွားနိုင်တဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်ကောင်းဖြစ်ဖို့ - Reader Choice
မိန်းမတွေ တမ်းတမ်းစွဲချစ်မ၀နိုင်ဖြစ်ပီး ဘယ်တော့မှပြစ်မသွားနိုင်တဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်ကောင်းဖြစ်ဖို့
Team Ag · Posted on January 18, 2021 January 18, 2021
1. နံနက်အိပ်ယာထတဲ့အခါ “ မင်းနေကောင်းလား၊ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်နော် ” စိုးရိမ်စကား ပြောပေးတတ်သူ။
2. နံနက်စာစားတဲ့အခါ “ ကော်ဖီ ၁-ခွက် ကို ၂-ယောက် တူတူသောက်ကြရအောင်ကွာ ” မျှဝေခံစားတတ်သူ။
3. နံနက်စာ ပြင်ဆင် (သို့ မဟုတ်) စားသောက်ပြီးတဲ့အခါ ပန်းကန်ခွက်ယောက်ကူသယ်/ကူသိမ်းပေးတတ်သူ။
4. ထမင်းစားတဲ့အခါ “လက်ရာကတော့ရှယ်ပဲ…ယောကျာ်း အကြိုက်သိ တဲ့ မိန်းမ..ငယ်ငယ်တုန်းက စားခဲ့တဲ့ မေမေ့လက် ရာ အတိုင်းဘဲ” ချီးမွမ်းမြှောက်ပင့်ပြောတတ်သူ။
5. အလုပ်သွားခါနီးတိုင်း အိမ်နောက်ဖေးမှာအလုပ်ရှုပ်နေတတ်တဲ့ ချစ်ဇနီးကိုမတွေ့ တွေ့ အောင်ရှာပြီး “မေကြီးရေ.. အလုပ် သွားပြီကွာ” လို့ အရေးတယူနှုတ်ဆက်တတ်သူ (လူလစ်ရင် အနမ်းဖြင့်နှုတ်ဆက် တတ်သူ)
6. နေ့ လယ်ဘက် ထမင်းစားချိန် အားလပ်ချိန်မှာ ဖုန်း (သို့ မဟုတ်) ဖုန်းမတ်ဆေ့ခ်ျဖြင့် “မိန်းမရေ ဘာတွေ လုပ်နေတုန်းကွာ ဒီမှာ ညောင်းနေလို့ ဇက်ကြောလေးလာဆွဲပေးပါဦး ” အရွှန်းဖောက်တတ်သူ။
7. အလုပ်ဆင်းချိန် အိမ်အပြန်လမ်းမှာ မိသားစုအတွက် စားစရာလေးဖြစ်ဖြစ် ၀ယ်လာတတ်သူ။
10. မိမိအလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူကို ကောင်း၏/ဆိုး၏/ပျော်၏/စိတ်ညစ်၏… ရင်ဖွင့်ပြောပြတတ်သူ။
11. ဇနီးသည်ကို စိတ်ဝင်စားမှုရှိသူ/နွေးနွေးထွေးထွေးပွေ့ ဖက်တတ်သူ (လင့်ဝတ္တရားကျေသူ)
12. ဆွေမျိုးများ နဲ့အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတွေရှေ့ မှာ ဇနီးသည်ကို ဖေးဖေးမမ ဂရုစိုက်ပြတတ်သူ။
13. သားသမီးတွေ ရှေ့ မှာ “ မင်းတို့ မေမေက ကျေးဇူးရှိတယ်နော် မေမေ့စကားနားထောင် မေမေ့ကို စိတ်ညစ်အောင် မလုပ် ရဘူး” လို့မကြာခဏ ပြောပေးတတ်သူ။
14. ဇနီးသည် အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အခါ ကလေးတွေကိုအဖော်ပြုပေးတတ်သူ။
15. အလုပ်ပိတ်ရက်တွေမှာ အခါအားလျော်စွာ မိသားစုကို သီးသန့် အချိန်ပေးပြီး အပြင်ထွက်လည်ပတ်ပေးတတ်သူ။ နှစ်ယောက်ထဲရှိနေချိန်မှာ မိမိ ဇနီးကို မကြာခဏဆိုသလို “ မင်း ကတော့ ဒို့ မိသားစုအတွက် မရှိမဖြစ်ဘဲကွာ၊ မင်းရှိလို့ သာပေါ့၊
မင်းလည်းတော်တော် ပင်ပန်း နေပြီနော် ” စတဲ့ စကားလေး တခွန်းဖြင့် ကျေးဇူးတင်စကားပြောပေးဖို့ နှုတ်မနှေးကြပါနဲ့ လို့သုတေသီများက အကြံပြုထားပါတယ်။ ဒီလိုဂရုစိုက် စကားလေးတွေကြောင့် ဇနီးသည်အတွက်သာမက၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအတွက်ပါ
အိမ်ထောင်ရေးသုခဖြစ်စေမှာပါတဲ့။ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘ၀ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ နော်​။ မူရင်ရေးသားသူအား လေးစားစွာ ခရက်ဒစ် ပေးပါသည်။
1. နံနကျအိပျယာထတဲ့အခါ “ မငျးနကေောငျးလား၊ ကနျြးမာရေးဂရုစိုကျနျော ” စိုးရိမျစကား ပွောပေးတတျသူ။
2. နံနကျစာစားတဲ့အခါ “ ကျောဖီ ၁-ခှကျ ကို ၂-ယောကျ တူတူသောကျကွရအောငျကှာ ” မြှဝခေံစားတတျသူ။
3. နံနကျစာ ပွငျဆငျ (သို့မဟုတျ) စားသောကျပွီးတဲ့အခါ ပနျးကနျခှကျယောကျကူသယျ/ကူသိမျးပေးတတျသူ။
4. ထမငျးစားတဲ့အခါ “လကျရာကတော့ရှယျပဲ…ယောကျြား အကွိုကျသိ တဲ့ မိနျးမ..ငယျငယျတုနျးက စားခဲ့တဲ့ မမေလေ့ကျ ရာ အတိုငျးဘဲ” ခြီးမှမျးမွှောကျပငျ့ပွောတတျသူ။
5. အလုပျသှားခါနီးတိုငျး အိမျနောကျဖေးမှာအလုပျရှုပျနတေတျတဲ့ ခဈြဇနီးကိုမတှတှေ့အေ့ောငျရှာပွီး “မကွေီးရေ.. အလုပျ သှားပွီကှာ” လို့အရေးတယူနှုတျဆကျတတျသူ (လူလဈရငျ အနမျးဖွငျ့နှုတျဆကျ တတျသူ)
6. နလေ့ယျဘကျ ထမငျးစားခြိနျ အားလပျခြိနျမှာ ဖုနျး (သို့မဟုတျ) ဖုနျးမတျဆခြေျ့ဖွငျ့ “မိနျးမရေ ဘာတှေ လုပျနတေုနျးကှာ ဒီမှာ ညောငျးနလေို့ဇကျကွောလေးလာဆှဲပေးပါဦး ” အရှနျးဖောကျတတျသူ။
7. အလုပျဆငျးခြိနျ အိမျအပွနျလမျးမှာ မိသားစုအတှကျ စားစရာလေးဖွဈဖွဈ ဝယျလာတတျသူ။
10. မိမိအလုပျနဲ့ပတျသကျပွီး ဇနီးဖွဈသူကို ကောငျး၏/ဆိုး၏/ပြျော၏/စိတျညဈ၏… ရငျဖှငျ့ပွောပွတတျသူ။
11. ဇနီးသညျကို စိတျဝငျစားမှုရှိသူ/နှေးနှေးထှေးထှေးပှဖေ့ကျတတျသူ (လငျ့ဝတ်တရားကသြေူ)
12. ဆှမြေိုးမြား နဲ့ အပေါငျးသငျးမိတျဆှတှေရှေမှေ့ာ ဇနီးသညျကို ဖေးဖေးမမ ဂရုစိုကျပွတတျသူ။
13. သားသမီးတှေ ရှမှေ့ာ “ မငျးတို့မမေကေ ကြေးဇူးရှိတယျနျော မမေစေ့ကားနားထောငျ မမေကေို့ စိတျညဈအောငျ မလုပျ ရဘူး” လို့ မကွာခဏ ပွောပေးတတျသူ။
14. ဇနီးသညျ အလုပျရှုပျနတေဲ့အခါ ကလေးတှကေိုအဖျောပွုပေးတတျသူ။
15. အလုပျပိတျရကျတှမှော အခါအားလြျောစှာ မိသားစုကို သီးသနျ့ အခြိနျပေးပွီး အပွငျထှကျလညျပတျပေးတတျသူ။ နှဈယောကျထဲရှိနခြေိနျမှာ မိမိ ဇနီးကို မကွာခဏဆိုသလို “ မငျး ကတော့ ဒို့မိသားစုအတှကျ မရှိမဖွဈဘဲကှာ၊ မငျးရှိလို့သာပေါ့၊
မငျးလညျးတျောတျော ပငျပနျး နပွေီနျော ” စတဲ့ စကားလေး တခှနျးဖွငျ့ ကြေးဇူးတငျစကားပွောပေးဖို့နှုတျမနှေးကွပါနဲ့လို့ သုတသေီမြားက အကွံပွုထားပါတယျ။ ဒီလိုဂရုစိုကျ စကားလေးတှကွေောငျ့ ဇနီးသညျအတှကျသာမက၊ ခငျပှနျးဖွဈသူအတှကျပါ
အိမျထောငျရေးသုခဖွဈစမှောပါတဲ့။ အောငျမွငျပြျောရှငျတဲ့ မိသားစုဘဝပိုငျဆိုငျကွပါစလေို့နျော။ မူရငျရေးသားသူအား လေးစားစှာ ခရကျဒဈ ပေးပါသညျ။